Hello Nepal News » मिलानमा कोठा बन्द : इकार्डी नयाँ सिजन कहाँबाट खेल्छन् ?
मिलानमा कोठा बन्द : इकार्डी नयाँ सिजन कहाँबाट खेल्छन् ?
इटालियन क्लब इन्टर मिलानका अर्जेन्टिनी फरवार्ड माउरो इकार्डीको भविष्य अझै अनिश्चित छ । सरुवा बजार बन्द हुन केही घन्टा मात्रै बाँकी छँदा पनि स्टार फरवार्ड नयाँ सिजन कुन क्लबबाट खेल्छन् भन्ने कुरा टुंगिन सकेको छैन ।
यसअघि इन्टर मिलानका नयाँ प्रशिक्षक एन्टोनियो कोन्टेले इकार्डीले फेरि मिलानका लागि नखेल्ने भनेर उनको बिदा पक्का भएको प्रष्ट पारिसकेका छन् । इकार्डीका केही खराब आचरणका कारण कोन्टे र क्लब उनलाई टोलीमा राख्ने पक्षमा छैनन् । तर, उनी कुन क्लबमा जान्छन् भन्ने कुरा पनि हालसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
यसअघि इकार्डी इटालीकै युभेन्टस जान सक्ने चर्चा चलेको थियो । तर, युभेन्टसले नयाँ फरवार्ड भित्र्याउने सम्भावना छैन । पछिल्ला रिपोर्टअनुसार अर्जेन्टिनी फरवार्ड अब लोनमै भए पनि नयाँ क्लबमा जाने सम्भावना बढेको छ । उनी स्पेनिस भ्यालेन्सिया र फ्रेन्च क्लब पिएसजी लोनमा जान सक्ने चर्चा छ ।
प्रकाशित मिति १६ भाद्र २०७६, सोमबार ०३:३५